Dabballoonni Wayyaanee TPLF(OPDO)n Amma Illee Ummata Oromoo Goyyomsaa Jiru. | QEERROO
Posted on April 30, 2017 by Qeerroo
Guyyaa kaleessaa godina shawwaa lixaa aanaa Ada’aa Bargaatti barattoonni Mana barumsaa Reejjii sadarkaa tokkoffaa FDXG eegaluun aadannoo adda addaa ageessisaa olan. Yaadannoo isaan ageessisan keessaa birgi Abbaa biyyummaa nuf haa eegamu,hidhamtootni oromoo Mana hidhaa jiran gad haalakkifaman,labsiin yeroo muddamaa nurraa kadhuu qaba jechuun mormii isaanii ageessisa oolan jedha qeerroon Ada’aa Bargaa.
Gama kaaniin Yuunibarsiitii Jimmaa Keessatti Barattoota Barana Eebbifaman Walitti Qabuun Hololaa Jiran ebila 29,2017 Mootummaadha kan ofiin jettu humni bicuu TPLF barattootaan hojii uumaa maqaa jedhuun bakkoota hedduuttii barattoota eebbifaman walitti qabuun cookaa jiran. Gurmaahuun akka dalagaa mataa ofii uummata irratti tibba kana jechuun kaleessaa qabee Jimmaa Yuunibarsiitii Mooraa Kitoo Furdiisaa keessatti barattootaaf waamicha taasistee jirti. Barattoonnii miseensa diinaa ta’aniin ala Walga’ii sana irra kaawwaan hirmaataa akka hinjirrellee dubbatame. Gochaawwaan fokkisoo uummatarratti taasisuun alatti qaamaa barataaf yaadu fakkaatanii akkanaan uummata sobuuf yaaluun illee gowwummaa ta’uu barattoonni Qeerroon moorichaa dubbatan